Master, Author at Jowhar somali news leader - Page 2 of 83
Madaxweyne Xasan Sheekh oo gaaray Turkiga iyo kulamo u bilowday.
July 03 (Jowhar.com)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayey oo soo gaaray dalka Turkiga ayaa waxaa si diirran u soo dhaweeyey Wasiirka Waxbarashada dalka Turkiga Mudane…
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u safray dalka Turkiga.
July 03 (Jowhar.com)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo oo casuumaad rasmi ah ka helay dhiggiisa dalka Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan ayaa ka amba-baxay garoonka…
Ra’iisul wasaare Xamse oo magacaabistii ugu badneyd maanta sameeyay.
July 03 (Jowhar.com)-Wasiirka Koowaad ee xukuumadda Soomaaliya oo todobaadkii hore si rasmi ah xilka ula wareegay toosna u shaqa bilaabay ayaa maanta sameeyay magacaabistii ugu badneyd.
Dowladda Soomaaliya oo Shatiyo siisay laba Banki laga leeyahay Turkiga iyo Masar.
July 03 (Jowhar.com)-Dowladda Soomaaliya ayaa Shatiyo ay ku shaqeeyaan siisay laba banki oo laga kala leeyahay dalalka Masar iyo Turkiga, kuwaas oo lagu kala magacaabo Banque Misr iyo Ziraat Katilim, kadib markii maanta la ansixiyay codsiga…
Wararkii u danbeeyay qarax xooggan oo ka dhacay dalka Ruushka iyo khasaaraha ka dhashay.
July 03 (Jowhar.com)-Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada Ruushka ku taalla ee Belgorod, taas oo dhacda xadka Ukraine, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka.
Kenya oo Shiinees dil loo heysto ku wareejisay dowladda Itoobiya.
July 03 (Jowhar.com)-Dowladda Kenya ayaa gacanta ku dhigtay Afar nin oo u dhalatay dalka Shiinaha, kuwaasoo dhawaan dalkeeda si dhuumaaleysi ah ku yimid, iyagoo isaga soo tagay magaalada Adis-Ababa ee caasimadda dalka aan Bada leheyd ee…
Askar u dhalatay dalka Uganda oo lagu dilay qarax ka dhacay gobolka Sh.Hoose.
July 03 (Jowhar.com)- Faah faahino dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax xooggan oo ciidamo ka tirsan howlgalka ATMIS Ex-AMISOM lagula eegtay magaalo xeebeedka Marko ee xarunta gobolka Sh.Hoose, iyadoo qaraxan uu dhaliyay khasaare xooggan.
Ra’iisul wasaare Xamse oo magacaabay Madaxa hab-maamuuska ee xafiiskiisa.
July 03 (Jowhar.com)-Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa magacaabay Madaxa hab-maamuuska ee xafiiskiisa, isagoo xilakn u magacaabay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Cabdillaahi Shariif.
Safiirka Mareykanka oo beeniyay iney aqoonsi caalami ah u raadinayaan Somaliland.
July 03 (Jowhar.com)-Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre oo magaalada Minneapolis uga qeyb galay xuska todobaadka xoriyada ayaa ka hadlay dalab dhawaan uga yimid Somaliland oo ahaa in loo ixtiraamo gooni isku taaggooda ay ku…
Madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta ku wajahan dalka Turkiga.
July 03 (Jowhar.com)-Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi balaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta ku wajahan dalka Turkiga, kadib casuumaad rasmi ah uu helay.